Wararkii Ugu Dambeeyay Qarax Ka Dhacay Magaalada Kismaayo. – Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Qarax Ka Dhacay Magaalada Kismaayo.
calamada June 7, 2018 1 min read
Qaraxan waxa u ka dhacay guri ay magaalada Kismaayo ka daganyihiin maleeshiyaadka Asha haado la diriirka maamulka gaala raaca Murtad Axmed Madoobe,waxa uu sigaar ah qaraxa kaga dhacay xaafada Fiya-afmadow.
Qaraxan oo dhawaaqiisa si weyn looga maqlay inta badan Xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa la xaqiijiyay in lala beegsaday gurigan ay Murtadiintu ku sugnaayeen,waxeyna warar hoose sheegayaan in maamulka Axmed Madoobe khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay qaraxaasi.
Guriga uu qaraxa ka dhacay waxaa soo gaaray maleeshiyaatka Murtadiinta kuwaasi oo xiray wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa guriga qaraxa uu ka dhacay waxeyna goob joogayaal sheegeen in maleeshiyaatka guriga ka qaadeen askar dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxaasi.
Qaraxan waxa uu kusoo aadayaa xilli sidoo kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin dagaallo culus ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Kufaarta AMISOM ee degmada Qoryooley iyo deegaanka Golweyn ee duleedka degmada Buulo mareere ee gobalka Shabeelada Hoose.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 22-09-1439 Hijri.
Next: Dhageyso Darsiga Lix Iyo Tobanaad Ee Kitaabka Waxaat Jihaadiyah.